Fitsaboana Proton - Fitsaboana Sarcoma any San Diego - CA Protons
Fomba fitsaboana fitsaboana Proton ho an'ny Sarcoma
Miady amin'ny Sarcoma miaraka amin'ny Precision toa an'i Laser
Ny teknolojia fanaraha-maso pensilihazo pensilihazo avy any California Protons dia endrika iray tena tsara amin'ny fitsaboana taratra sarcoma izay mamela ny dokotera anay hikendry fivontosana sarcoma voafidy ao anaty sela malefaka na taolana mampifangaro azy miaraka amin'ny taratra avo be.
Raha oharina amin'ny fitsaboana fitsaboana pasifika pasifika taloha, ny teknolojia scan-be-pensilihazo dia manome ny fitsaboana taratra ho an'ny sarcoma ao anatin'ny 2 milimetatra ary amin'ny fikarakarana fatratra. Azontsika atao ny mamely ny fivontosan'ny fivontosana amin'ny alàlan'ny fivontosana ary manamaivana ny fihanaky ny vatan'ny taolana mahasalama. Zava-dehibe izany ho an'ny sarcomas izay mifanakaiky amin'ireo taova mitsikera sy saro-pady izay mety hampihena ny fiatraikany sy ny loza ateraky ny homamiadana faharoa. Ny fampihenana ny poizina mifandraika amin'ny taratra dia mampitombo ihany koa ny fahafahan'ny marary mameno ny fitsaboana amin'ny fampiatoana na fanemorana kely kokoa.
Ny sarosa hafa hita any amin'ny taolanao, hozatra, tendon, cartilage, nervey, tavy ary lalan-dra
Arovy ny fonao, ny havokavoka, ny hazondamosina, ny fiterahana taova ary ny rafi-pandevonan-kanina
Tombontsoa azo avy amin'ny fitsaboana Proton Radiation for Sarcoma
Ny fitsaboana protonolika mandroso dia mamela ny dokotera amin'ny fomba voafantina tsara kokoa amin'ny taratra miadana amin'ny homamiadana sela, ary mampihena ny fatra amin'ny sakelika sela misy taova mahasalama sy ireo sela mihintsy. Amin'ny toe-javatra sasany, izany dia naseho mba hanomezana fitsaboana haingana kokoa noho ny fitsaboana taratra X-ray na dia amin'ny toe-javatra sarotra aza.
Satria mety ho eo akaikin'ny taova mitsikera sy saro-pady ny sarcomas, mety ho sarotra ny mitsabo ireo fivontosan'ny sela ireo. Ny teknolojia fanodinam-bokatra amin'ny alàlan'ny tariby amin'ny pensilihazo dia mampisy taratra miaraka amin'ny fametrahana sy ny fanaraha-maso lehibe kokoa noho izany ny fiparitahana amin'ireo taova sy ny taova eo akaikiny toa ny fonao, ny havokavanao, ny hazalanao, ny taova, ny taovam-pananahana ary ny rafi-pandevonan-kanina.
Ny fitsaboana Proton dia mety hanolotra tombony fitsaboana amin'ny fitsaboana teknika mahazatra amin'ny fitsaboana sarcoma, araka ny torolàlana sarcoma 2009 avy amin'ny National Comprehensive cancer Network (NCCN).
Fitsaboana Proton ho an'ny Sarcoma
Mety aminao na amin'ny zanakao ve?
Miankina amin'ny sehatra sarcoma, ny fitsaboana mitambatra, ny fitsaboana simika ary ny taratra dia mety ilaina amin'ny fivontosana sarcoma sasany. Ny safidy fitsaboana koa dia voakasiky ny karazana sarcoma, ny toerana ao amin'ny vatana, ny taonany, ny fahasalamana ankapobeny ary ny filan'ny tena manokana.
Fihetseham-po Sarcoma miverina
Mety ho sarotra ny mitsabo ireo faritra mampihetsi-po teo aloha. Ny tavy salama manodidina ny fivontosana miverimberina dia tsy "manadino" ny fitrandrahana taratra teo aloha, ary ny fatra fanampiny dia mitohy mampitombo ny ratra amin'ny ratra ara-dalàna. Ny fitsaboana ny vatan'i Proton dia ahafahan'ny dokotera mifantoka tsara amin'ny fatra amin'ny tanjona ary mametra izany any an-toeran-kafa, ka avelao ny fitsaboana indray miaraka amin'ny taratra amin'ny marary voafantina.
Vokatra fitsaboana fitsaboana Sarcoma Proton & vokatra maharitra
Fitsaboana fitsaboana Proton ho an'ny sarcoma ao amin'ny California Protons Cancer Therapy Center any San Diego dia mety hanolotra valiny mitovy amin'ny taratra X-ray mahazatra, ary hampihena ny vokany maharitra sy mety hampidi-doza toy ny fahasimban'ny taratra amin'ny fo, havokavoka, hazondamosina, fiterahana. taova sy ny rafi-pandevonan-kanina. Izy io koa dia manolotra ny mety hisian'ny vintana ambany kokoa ho an'ny homamiadana faharoa aorian'ny fiainana noho ny fihenan'ny taratra amin'ny sela sy taova mahasalama.
Fanadihadiana momba ny fikarohana manohana ny fitsaboana ny proton ho an'ny Sarcoma
Famerenana mahomby amin'ny fitsaboana proton amin'ny fitsaboana ny chondrosarcoma amin'ny fototry ny karandoha
Fahombiazana sy fiarovana ny famerenam-panafody fitsaboana ny diabena proton ho an'ny chordomas sy chondrosarcomas ny tobin'ny karandoha: tatitra voalohany
Radioterapi miorina amin'ny proton ho an'ny osteosarcoma tsy voafehy na tsy feno
Fitsaboana proton-based mifototra fitsaboana ho an'ny chordoma extracranial